8731 ukukhutshwa kweenkcukacha ze-real-time data.
I-imali yedatha yokutshintshwa kwamazinga ehlabathini lonke. Ideshibhodi yakho kunye namanani okutshintshiselana, iitshathi kunye nekhredithi yemakethi yeenkcukacha zokukhethwa. 8731 ukukhutshwa kweenkcukacha ze-real-time data.
USD - US dollar BTC - Bitcoin EUR - Euro GBP - phawundi omhle JPY - Yen CNY - yuan RUB - Russian engange AUD - Busie dollar AZN - Manat Azerbaijani ALL - Amaleki Albanian DZD - Dinar Algerian XCD - Dollar East Caribbean AOA - kwanza MOP - Pataca macanese ARS - Ipeso rgentine AMD - Dram Armenian AWG - Florin Aruba AFN - Afghani Afghan BSD - Dollar Bahamian BDT - Bangladesh Taka BBD - Barbados dollar BHD - Bahrain Dinar BYR - Engange Belarusian BYN - Engange Belarusian BZD - Belize dollar XOF - CFC franc BMD - Bermuda dollar BGN - Lev Bulgarian BOB - Boliviano Bolivian BAM - Bosnia and Herzegovina uphawu zijikwe BWP - Botswana KWIPULA BRL - Lenene Brazilian BND - Brunei dollar SGD - Singapore dollar BIF - Burundi franc BTN - Bhutan ngultrum INR - Indian બિન umgqomo VUV - Vanuatu vatu HUF - Forint Hungarian VEF - YaseVenezuela Bolivar Fuerte VND - Vietnamesse dong XAF - CFC franc HTG - Gourde Haiti GYD - Guyana dollar GMD - Dalasi Gambian GHS - Ghana cedi GTQ - Quetzal waseGuatemala GNF - Guinea franc GIP - Gibraltar phawundi HKD - Hong Kong dollar HNL - Honduran Lempira GEL - Eliziilari Georgian DKK - Isithsaba Danish DJF - Djibouti franc DOP - Dominican ipeso EGP - Iponti umYiputa ZMW - Iikwacha zaseZambia MAD - Dirham yaseMorocco ZWD - Dollar Zimbabwe ILS - Ngokweshekele entsha Israeli IDR - UShishino Indonesian JOD - Jordan Dinar IQD - Dinar aseIraq IRR - Kanga Iranian ISK - Iceland krone YER - Kanga Yemeni CVE - Cape Verde escudo KZT - Kazakhstani Tenge KYD - Cayman Islands dollar KHR - Riel Khambodiya CAD - Dollar Canadian QAR - Riyal Qatari KES - Kenya idenariyo COP - Ipeso Colombian KMF - Franc Comoran CDF - Franc aseCongo KPW - Laphumelela Korean North KRW - Laphumelela yaseMzantsi Korea RSD - Dinar Serbian CRC - Costa Rica colon CUP - Ipeso waseCuba wendlela KWD - Dinar Kuwaiti NZD - New Zealand dollar KGS - Som Kyrgyzstani LAK - Lao Kip LVL - Latvian lat LSL - Loti ZAR - Rand LRD - Liberia dollar LBP - Iponti yaseLebanoni LYD - Dinar Libyan LTL - Litas Lithuanian CHF - Franc Swiss MUR - Mauritius બિન umgqomo MRO - Ouguiya Mauritanian MGA - Ariary Malagasy MKD - Denar Macedonian MWK - Malawi iikwacha MYR - Malaysin ringgit MVR - Rufiyaa Maldivian MXN - Ipeso Mexican MZN - Metical waseMozambique MDL - LEU Moldova MNT - Tugrik Mongolian MMK - Kyat waseBurma NAD - Dollar Namibian NPR - બિન umgqomo eliseNepal NGN - Naira waseNigeria ANG - Gulden Antilliaanse NIO - Cordoba AmaNicaragua XPF - French Pacific franc NOK - Krone Norwegian AED - UAE Dirham OMR - Kanga Omani SHP - Saint Helena phawundi PKR - Pakistan બિન umgqomo PAB - Balboa yasePanama PGK - kina PYG - arani PEN - Peruvian Nuevo sol PLN - Zloty Polish RWF - Franc eyayiseRwanda RON - LEU IsiRomanian XDR - SDR (Special ngokuzoba amalungelo) SVC - Colon Salvador WST - Tala STD - Sao Tome and Principe dobra SAR - Riyal Saudi SZL - lilangeni TRY - Lira New Turkish SCR - Seychelles બિન umgqomo SYP - Iponti waseSiriya SKK - Slovak eziikoruna SBD - Solomon Islands dollar SOS - Idenariyo abangamaSomali SDG - Iponti Sudanese SRD - Surinam dollar SLL - Leone TJS - Somoni Tajikistani THB - Baht Thai TWD - Taiwan dollar entsha TZS - Idenariyo Tanzanian TOP - pa`anga TTD - Trinidad and Tobago dollar TND - Dinar Tunisian TMM - Turkmenistan manat TMT - Turkmenistan manat entsha UGX - Uganda idenariyo UZS - Uzbekistan isixa UAH - ihryvnia UYU - Ipeso Uruguayan FJD - Fiji dollar PHP - Philippines ipeso FKP - Falkland Islands phawundi HRK - Kuna Croatian CZK - Eziikoruna Czech CLP - Ipeso Chilean SEK - Krona Swedish LKR - Sri Lanka બિન umgqomo ERN - Nakfa ETB - Birr elingumTiyopiya JMD - Dollar jamaican SSP - Iponti Sudanese South CLF - Chilean Unidad de Fomento EEK - Kroon Estonian GGP - Guernsey phawundi IMP - Manx phawundi JEP - Jersey phawundi MTL - Lira baseMalta XAG - Troy paaunzi yesilivere XAU - Troy ukanti zegolide / igolide electronic) ZMK - Iikwacha zaseZambia ZWL - Zimbabwe dollar ATS - Idenariyo waseOstriya AON - Kwanza entsha Angola BEF - Franc Belgian GRD - Yedrarhma Greek IEP - Iponti Irish ESP - Peseta Spanish ITL - Lire Italian CYP - KweSipro phawundi DEM - Deutsche uphawu NLG - Netherlands Guilder PTE - Escudo Portuguese SIT - Tolar aseSlovenia SRG - Surinam Guilder FIM - Uphawu fin FRF - France frank ECU - ECU YUM - Dinar entsha slavia
Nemizuzu emihlanu Nemizuzu engama-15 Nganye iyure
Bonisa: xabiso namhlanje ityati yentengo yekhredithi ityethi yekethi yemarike umthamo wezorhwebo umthamo wohwebo lwezorhwebo
BTC = 58 903.39 USD
Bitcoin itshati ephilayo ekhoyo
Bitcoin ikhonkco yemakethe
1 142 382 760 762.70 US dollar
-39 271 391 564.80 USD (-3.32%)
utshintsho lwentengo ukususela ngezolo
Faka le widget kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi.
ETH = 3 994.24 USD
Ethereum itshati ephilayo ekhoyo
Ethereum ikhonkco yemakethe
495 543 970 913.53 US dollar
-4 726 879 090.76 USD (-0.94%)
XRP = 1.02 USD
XRP itshati ephilayo ekhoyo
XRP ikhonkco yemakethe
52 557 834 760.21 US dollar
-89 015 402.69 USD (-0.17%)
BCH = 560.19 USD
Bitcoin Cash itshati ephilayo ekhoyo
Bitcoin Cash ikhonkco yemakethe
11 539 922 013.57 US dollar
-229 563 151.21 USD (-1.95%)
EOS = 4.24 USD
EOS itshati ephilayo ekhoyo
EOS ikhonkco yemakethe
4 556 874 171.19 US dollar
-152 807 829.12 USD (-3.24%)
I-Imali yedatha yokutshintshwa kwamazinga ehlabathini lonke. Inani lexabiso lamanje lanamhlanje nayiphi na i-imali yedatha.
Izinga lokutshintshiselwa kwemali ye-Digital kwi-intanethi, ukuxabisa ixesha langempela
Imbali yamaphepha edijithali yemali. Inani leemali zeDijithi, imbali yexabiso ledijithali.
Ukusekwa kwiimarike zemali yedijithali: ininzi ethembisayo, ezitsha ezinokuthenjwa kunye nezindleko zemali zedijithali ngoku.
Zonke izixhobo zokudibanisa ngexabiso labo eliqhelekileyo namhlanje.
Zonke izixhobo zokudibanisa ngexabiso eliphezulu kakhulu namhlanje.
Zonke iimarike ze-crypto kwihlabathi jikelele kunye namanani okutshintshisana nanamanani kunye nokuthengisa.
Zonke izixhobo zokudityaniswa ngeendleko zabo kunye nomyinge wezorhwebo namhlanje.
Amanani otshintshiselwano nge-Cryptocur lwemali kwiwebhusayithi yethu abonisa ixabiso langoku layo nayiphi na i-imali yedatha ekhethiweyo namhlanje. Ixabiso lokutshintshiselana nge-Imali yedatha libalwa njengamaxabiso aphakathi kuzo zonke iimalike ze-crypto emhlabeni apho le ndlela ye-imali yedatha ithengiswa ngayo namhlanje. Unokulandela inqanaba lokutshintshiselana ngemali ye-elektroniki ukufumana elona thuba lokutshintsha kunye nokuthengisa.
Amaxabiso otshintshiselwano nge-imali yedatha yendawo yethu ihlaziywa rhoqo kwimizuzwana engama-30. Funda i-crypto exchange rate kwi-intanethi simahla kwaye okwangoku ngexesha langempela.
Ixabiso lokutshintshiselana nge-imali yedatha lithengiswa kwiintengiso ezahlukeneyo zee-crypto kunye neimarike ze-crypto. Ngokungafaniyo nemali yodidi, akukho mntu useta amaxabiso ayo kwanamhlanje okanye ngomso. Kutshintshiselwano ngalunye lwe-imali yedatha, iqondo lotshintshiselwano nge-imali yedatha luyatshintsha ngamaxesha ahlukeneyo. Ukuze uqonde ngokuchanekileyo umyinge we-imali yedatha, ngoku kufuneka ubale kwangoko ixabiso eliphakathi lereyithi yotshintshiselwano kuzo zonke iimakethi ze-crypto.
I-Cryptoratesxe.com ibala umndilili wereyithi yokutshintshiselana ngexabiso le-cryptocur lwemali kuzo zonke iimarike ze-crypto.
Utshintshiselwano nge-Imali yedatha, amaxabiso akwi-Intanethi
Sisoloko sibeka iliso kwi-8731 i-imali yedatha exchange rate kuzo zonke iimalike ze-crypto emhlabeni.
Zininzi i-imali yedatha kwaye ayizizo zonke ezi zentengiso zotshintshiselwano nge-crypto yonke imihla.
Sijonge ukuba yeyiphi irhwebo ethengiswa kuyo nayiphi na imakethi ye-crypto kwaye siqokelele ireyithi ye-imali yedatha ngokubanzi yazo zonke izinto ezenziweyo kuzo zonke iimakethi ze-crypto ukubala umyinge ophakathi wale imali yedatha. Unokujonga simahla ireyithi yokutshintshiselana yayo nayiphi na imali ye-cryptocur lwemali kwenye.
Unokulandela umkhondo wokutshintshiselana kwesinye isihlobo se-imali yedatha kwesinye usebenzisa iphaneli yobuqu. Iqondo le-crypto liboniswa ngendlela yeegrafu kunye namanani, utshintsho kumgangatho lubonakaliswa kwintsimi eyahlukileyo ngepesenti. I-Imali yedatha ekhulayo kunye nokuwela kwe-imali yedatha kuboniswa ngemibala eyahlukeneyo.
Inqanaba lokutshintshwa kwemali ye-imali yedatha.
Amanqanaba otshintshiselwano nge-cryptocur lwemali enokufundwa kwitshathi yeenguqu ezikhawulezileyo kwinqanaba le-imali yedatha kwiphaneli yesayithi okanye kwiphepha lokutshintsha kwemali kwi-imali yedatha ekhethiweyo kwi-intanethi. Xa umyinge we-imali yedatha ubonakalisa elona xabiso lisezantsi - eli lelona xesha lilungileyo lokuthenga, kwaye xa i-imali yedatha ifikelela kwinqanaba eliphezulu lotshintshiselwano- lelona xesha lilungileyo lokuthengisa i-crypto.
Bitcoin inqanaba lokutshintshiselana kwanamhlanje 27 EyeDwarha 2021
I Bitcoin ireyithi yotshintshiselwano yanamhlanje lulwazi olusisiseko olusetyenziswa ngabantu abaninzi. Ungalifumana inqanaba Bitcoin yanamhlanje nakweyiphi na imali ye-imali yedatha nakweyiphi na imali yehlabathi kwiwebhusayithi yethu.
Sibonisa amaxabiso otshintshiselwano ayo yonke i-imali yedatha yonke imihla kwaye siyayazi umyinge hhayi namhlanje, kodwa kwanemihla ngemihla.
Inqanaba lanamhlanje Bitcoin ireyithi isungulwa njengesiphumo sokurhweba kwiitransekshini ezahlukeneyo kwixesha elithile, elixhomekeka kubunzulu kurhwebo lwe-crypto. Ngokufunda utshintsho lwenqanaba le-Bitcoin kwi-intanethi kwiintsuku zamva nje, unokuqikelela ixabiso le-imali yedatha yanamhlanje.
Bitcoin Ireyithi yotshintshiselwano ngomso 28/10/2021
I Bitcoin Ireyithi yotshintshiselwano ngomso, 28/10/2021 yenziwa ngexabiso eliphakathi ngosuku olusekwe Bitcoin ukurhweba ngotshintshiselwano nge-crypto namhlanje. Ngomso Bitcoin inqanaba lotshintshiselwano sisiseko sokutshintshiselana Bitcoin kwiindawo zokutshintshiselana nge 28/10/2021.
Ke ngoko, ngokujonga utshintsho lwe Bitcoin otshintshiselwano kwiwebhusayithi yethu ngexesha lasemini, ungalichaza kwangaphambili inani Bitcoin yangomso kunye namaxabiso otshintshiselwano Bitcoin kwiindawo zokutshintshiselana kwi-intanethi ngomso 28/10/2021.
Misela i Bitcoin ipaneli yokulandela umkhondo kwiphepha eliphambili lewebhusayithi yokutshintshiselana ngemali kunye nokubukela Bitcoin kwi-intanethi. Uya kuhlala ucinga ngokuchanekileyo inqanaba Bitcoin yangomso.
Ixabiso lokutshintsha kwe Bitcoin ngokuchasene nedola namhlanje
Bitcoin ukuya kwixabiso lokushintshana kwedola namhlanje yeyona nto iphambili Bitcoin ireyithi yotshintshiselwano kwintengiso yehlabathi. Lixabiso lotshintshiselwano lwe Bitcoin ngokuchasene nedola emisela inqanaba lotshintsho Bitcoin ngokuchasene nezinye iimali.
Ungabona umyinge we Bitcoin kwidola eku-intanethi apha .
Ixabiso lokutshintsha kwe Bitcoin ngokuchasene ne-euro namhlanje
Ixabiso lokutshintsha kwe Bitcoin kwi-euro yanamhlanje ikwaboniswa kwiwebhusayithi cryptoratesxe.com
Bitcoin ukuya kwi-Euro rate namhlanje - itshati ye Bitcoin ukuya kwi-Euro yi-avareji yalo lonke utshintshiselwano nge-crypto.
Bitcoin inqanaba lotshintshiselwano ngokuthelekiswa ne-euro njengenye yeemali eziphambili kwihlabathi ezimiselweyo Bitcoin inqanaba lotshintshiselwano ngokuthelekiswa nezinye iimali zehlabathi. Umkhondo Bitcoin ireyithi yotshintshiselwano yanamhlanje kwideshibhodi ye-intanethi yewebhusayithi yethu.
Ixabiso lokutshintsha kwe Ethereum ngokuchasene nedola namhlanje
Ethereum ukuya kwixabiso lotshintshiselwano lwedola namhlanje - umndilili Ethereum ireyithi yokutshintshiselana ngoku kurhwebo lonke kwimarike yemali yehlabathi. I Ethereum kwiDola limisela Ethereum kwezinye iimali kunye nee-cryptocurrensets.
Ungabona umyinge we Ethereum kwidola eku-intanethi apha .
Ixabiso lokutshintsha kwe Ethereum ngokuchasene ne-euro namhlanje
Ixabiso lokutshintsha kwe Ethereum kwi-euro yanamhlanje ikwaboniswa kwiwebhusayithi cryptoratesxe.com
Ethereum ukuya kwi-Euro rate namhlanje - itshati ye Ethereum ukuya kwi-Euro yi-avareji yalo lonke utshintshiselwano nge-crypto.
I Ethereum inqanaba lotshintshiselwano kwi-euro kunye nedola njengeyona mali iphambili yomhlaba ibeka isiseko se Ethereum kuzo zonke iimali zehlabathi. Landela Ethereum yanamhlanje kwiiphaneli ezikwi-intanethi zewebhusayithi yethu.
Ixabiso lokutshintsha kwe Litecoin ngokuchasene nedola namhlanje
Imali yokutshintsha Litecoin kwidola namhlanje- umndilili ophakathi Litecoin ngoku kwintengiso yokutshintshiselana nge-crypto. Ireyithi ye Litecoin kwi-dollar ichonga umyinge we Litecoin kwiimali ezahlukileyo kunye ne-cryptocurrensets.
Bona i Litecoin kwixabiso lokushintshiselana ngeedola kwi-intanethi apha .
Ixabiso lokutshintsha kwe Litecoin ngokuchasene ne-euro namhlanje
Ireyithi yokutshintshiselana Litecoin kwi-Euro yanamhlanje ibonisiwe apha kwiphepha elikhethekileyo.
Litecoin ireyithi yotshintshiselwano kwi-euro yanamhlanje - kwi-intanethi Litecoin kwi-euro ngumndilili wotshintshiselwano nge-imali yedatha.
I Litecoin inqanaba lotshintshiselwano kwi-euro kunye nedola njengeyona mali iphambili yomhlaba ibeka isiseko se Litecoin kuzo zonke iimali zehlabathi. Landela Litecoin yanamhlanje kwiiphaneli ezikwi-intanethi zewebhusayithi yethu.
Ixabiso lokutshintsha kwe XRP ngokuchasene nedola namhlanje
Bona XRP kwiDola ekwi-intanethi .
I XRP inqanaba lotshintshiselwano kwiDola namhlanje - umndilili XRP okwangoku kukurhwebo lwe-crypto. I XRP kwiDola limisela XRP kuzo zonke ezinye iimali kunye nee-cryptocurrensets.
Ixabiso lokutshintsha kwe XRP ngokuchasene ne-euro namhlanje
I XRP Ixabiso lokushintshiselana nge-Euro namhlanje kuboniswe kwiphepha elahlukileyo.
XRP kwi-euro yanamhlanje - XRP kwi-euro kwi-intanethi yi-avareji kutshintshiselwano nge-imali yedatha.
I XRP kwi-euro nakwiDola njengeyona mali iphambili sisiseko se XRP kuzo zonke ezinye iimali. Landela XRP ixabiso lanamhlanje kwixabiso lotshintsho kwiwebhusayithi yethu ekwi-Intanethi.